Maamulka Ahlusunna Oo Xukuno Kala Duwan Ku Riday 3 Qof * Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
By Xuseen Axmed	 On Nov 14, 2016
Maamulka Ahlusunna Waljameeca ee ka arimiya Gobolada Dhexe ayaa maanta xukuno kala duwan ku riday 3 qof oo rag ah.
Seddaxdan qof ee maanta lagu xukumay Magaalada Dhuusamareeb ayaa waxaa lagu eedeeyay in ay basaas u ahaayeen Ciidamada Itoobiya.
Maamulka Ahlusunna ayaa xukuno u dhexeeya sanad ilaa lix bilood waxa ay ku xukumeen rag ay ku eedeeyeen iney Jaajuus u ahaayeen Ciidanka Itoobiya kuwaasoo dadka ka afduuban jiray Gobolka Galgaduud kadibne ku wareejin jiray ciidanka Itoobiya.
Magaalada Dhuusamareeb ee xatunta Gobolka Galgaduud ayaa ka arimiya maamulka la magacbaxay Gobolada Dhexe.
Wasiir Ka Tirsan Maamulka Galmudug Oo Caawa Ku Xiran Magaalada Cadaado